मेरो एउटा एउटा बानी छ, म एम्बुलेन्सलाई ढोग्छु ।| Nepal Pati
रक्तसञ्चार बन्द हुनु, श्वासप्रश्वास रोकिनु र पुर्ण रुपमा मस्तिष्क अचेतन हुनुलाई मात्रै विज्ञान आफ्नो भाषामा मृत्यु भन्छ । यी तीन मध्ये कुनै दुइ पुर्ण रुपमा फेल खाए र एक स्वचालित रुपमा ठिकठाक नै छ भने पनि विज्ञान डेथ सर्टिफिकेट दिन मान्दैन । स्वाश रोकिए भेन्टिलेसन छ, रक्तसंचार रोकिए मुटु ट्रान्सप्लान्ट गर्न सकिन्छ या मस्तिष्क अचेतन हुँदा सेरेब्रमको पनि उसले उपचार सम्भव छ ऊ भनिरहेको छ ।
मृत्यु र जीवनको बारेमा आध्यात्म सजिलो उत्तर दिन्छ । यिनीहरु एकअर्काको विकल्प होइन । जीवनसँग मृत्युका या मृत्युसँग जीवनको अविच्छीन्न समबन्ध छ । जहाँ जीवन छ,त्यहाँ मृत्यु पनि छ या जहा मृत्यु छैन त्यहाँ जीवन कदापी थिएन/हुँदैन ।
सधै लाग्छ, मर्नु छ । तर बाच्नुपर्छ, यो पनि सधै लाग्छ । मृत्यु रोकियो भने कत्रो दुर्घटना होला ? साथै जन्म भएन भने त्यसको परिणाम कस्तो होला ? यस किसिमको कल्पनाको शृंखला म तोड्न सक्दिन । यस्तै प्रश्नहरु अल्झीरहन्छु हरबखत ।
कोहि बिरामी भए । कोहि मर्ने लागे । कोहि मरे । मलामी जान पर्यो ।…उफ्फ़ । कत्रो हाहाकार मच्चिन्छ ।
कोहि जन्मियो । कसैको पास्नी भयो । कसैको व्रतबन्ध भयो । कसैको विवाह भयो ।.. उफ्फ़ । कत्रो कोलाहल हुन्छ ।
म मलामी जान पनि मन पराउँदिन । विवाह, व्रतबन्ध, या जहाँ आफन्तजनहरुको जमघट हुन्छ, म त्यता पुग्न पन्छीन्छु । मलाई निको लाग्दैन, हाहाकार, कोलाहाल, चिच्चाहट, हतारो । अहँ होइन, मलाई निको लाग्दैन थियो । अब म यी सब घटना अपच्य नै भएपनि स्वीकार्दै जान थालेको छु । (हो पनि, जिन्दगी स्वीकार्दै जानु नै बाच्नु पनि हो ।)
म त्यसताका भर्खर शहर छिरेको थिए । मलाई शहर नौलो लाग्थ्यो, तर सुन्दर कहिल्यै लागेन । भिडमा छिर्थे, हराउथें, र निस्कन्थे । सडकमा निस्किन्थे, विभिन्न गाडीका टिटी, पुइपुई, घुइघुई र हुइहुईले म विरक्तिन्थे । त्यसै ताका एकथोकले म एकदमै डिस्ट्रभ होइरहन्थे – एम्बुलेन्स र एम्बुलेन्सको उदेकलाग्दो साइरन ।
कलेज मेरो लगनखेल थियो । बाफल बस्थे । दिदिभिनाजुसँग । कलङ्की पुगेर नै प्राय: गाडी चड्थे । त्यस दिन हतार थियो । ११ बजे कलेज पुगीसक्नु पर्ने हुन्थ्यो । १०: १५ भइसकेको थियो । आकाशेपुल चढ्ने होस् नै आएन ।..तल सडकबाट नै बाटो काट्दै थिए । अकस्मात मेरो कान लिएर केहि चिज तल पुग्यो । २ मिनेट जति मैले केहि सुनिन । बस् मेरा आँखाहरु चाक प्ल्याकप्ल्याक बनाउँदै बाबा पेट्रोल पम्प तिर बत्तिइरहेको एम्बुलेन्सलाई घुरीरहेथ्यो । होला ऊ कसैको ज्यान बचाउन दगुरेको होला ? तर एउटा ज्यान बचाउन लाग्दा अर्कोको ज्यान गइसकेको थियो ।
त्यसयता विभिन्न बाहनामा सडकमा एम्बुलेन्स र मेरो मुठभेड भइरह्यो । उ आफ्नो रवाफ छोड्दैन थियो ! उसैगरि बत्तेर आउथ्यो । मलाई पनि आफ्नो रवाफ छोड्नुथिएन । मलाई उसलाई बाटो छाडीदिन मन लाग्दैनथ्यो । यो सिलसिला निकै समय चल्यो । ऊसले आफ्नो रवाफ देखाइरह्यो । मैले आफ्नो अठोट छाडिन । एम्बुलेन्सलाई बाटो छोड्न त छाडीसकेकै थिए । झन बरु पर्खेर बस्न थाले । एम्बुलेन्स आइपुगेको मौका छोपेर कामै नभएता पनि म सडक वारपार गरिरहन थाले । प्राय: त ऊ रोकिन्थ्यो । र, मलाई बाटो छाडीदिन्थ्यो । म संसार जितेको सम्राट झैं मुख फुलाएर बाटो क्रस गर्थे ।
साथिहरुले कराए । दिदीले सम्झाउनुभयो । ९ वर्षको भान्जो भन्थ्यो, “दाइ । एम्बुलेन्सलाई त बाटो छोड्नु पर्छ । मर्न लागेको मान्छे बोकेर हिन्या हुन्छ । तपाइले यसो गर्दा के था कति बिरामी मरे पनि की ?” भिनाजु पनि भन्थे, “बाबु यसो नगर्नु । एम्बुलेन्सलाई जति हतार हामीलाई कहिल्यै हुँदैन् ।” मेरो एउटै तर्क हुन्थ्यो, ” हतार कसलाई छैन ? मर्नु कसलाई छैन ? ढिलोचाढो सबै मर्ने नै हो ।” मलाई लाग्थ्यो पनि आधा मिनेट ब्रेक हान्दा कुनै बिरामीको मुटु रोकिन्छ भने, मैले बाटो नकाटेको भए पनि सो बिरामी आधा मिनेट पछी मर्ने नै थियो । बाच्नेहरु मैले बाटो काट्दैमा मरिहाल्दैनन् ।
म हैरान थिए त एम्बुलेन्सको हतार गर्ने प्रवृति भन्दा पनि उसले निकाल्ने उदेकलाग्दो आवाज सँग । ‘मान्छे मरेको त छैन नि ? फेरी किन एकहोरो शंकको जस्तो आवाज निकाल्न पर्यो ? सोघोषित रुपमा एम्बुलेन्स आफैं पहिले नै बिरामीको मृत्युको कामना गर्छ ।’ मेरो यस्ता तर्क(कु)ले सब हैरान थिए । यस विषयमा प्लस टु सक्नुजेल नै विभिन्न समयमा विभिन्न व्यक्तिहरुसँग मेरो चर्काचर्की भइरह्यो ।
मलाई पनि ११ बजे कलेज पुग्ने पर्ने हुन्छ । (एक मिनेट ढिलो हुँदा दिनभर ट्वाइलेट छेउमा नाली सुँघ्दै भाले बन्नुपर्छ ।) एम्बुलेन्स सँगसँगै आफू चढेको लोकल बस जामबाट मुक्त हुन नदिएको देख्दा प्रथमत: म ट्राफिकसँग रिसाउथे । त्यसपछि बसको ड्राइभरसँग अनि लगत्तै निकै अघि कान चिर्ने आवाज निकाल्दै कुदीरहेको एम्बुलेन्ससँग पनि । मलाई ‘एम्बुलेन्सीयन प्रवृति’ राजतन्त्रको हैकमवाद भन्दा कम लाग्दैन थियो । एम्बुलेन्स जति नै कुदेर अस्पताल पुगे पनि डाक्टर नहुन सक्छ । डाक्ट भएपनि उपचार शुरु गर्नुअघि त्यत्रो लामो प्रोसेस लाग्छ । मैले आधा मिनेट एम्बुलेन्स रोक्दा त्यस्तो विपत नै के हुने थियो र ? तर खै किन हो मलाई चिन्नेहरु सधै मेरो यस प्रवृतिको भत्सर्ना गरिरहन्थे । सत्तोसराप गरिरहन्थे ।
भर्खर भर्खरै मैले प्लस टु सक्काएको थिए । कीर्तिपुरको घडी घर अगाडी बसेर चाउचाउ खाइरहेको थिए । अकस्मात आएको ममीको फोनले मलाई १० मिनेटमा बल्खु स्थित वयोधा हस्पिटल पुर्यायो । सानिमालाई गजुरीमा गाडीले ठक्कर दिएछ । फर्केर आएर किच्न पनि खोजेको रहेछ, बसका अरु यात्रुले कराएछन्, त्यसो हुन् पाएनछ । वयोधा पुग्दा उहाँलाई इमर्जेन्सी वार्ड ३०४ नम्बर बेडमा सुताएइको थियो । गाडीको खलासी, एम्बुलेन्सको ड्राइभर र केहि नर्सहरु सानीमालाई रुगीरहेका थिए । मलाई ती कसैसँग सहानुभूति या रिस थिएन, त्यतिखेर मलाई बस् सानीमा अनुहार हेर्नु थियो । हतारहतार काउन्टरमा ‘.. खनाल’ भने । लगत्तै मेरा पछाडि डाक्टर र नर्सको झुण्ड आइपुग्यो । त्यै झुण्डसँगै म इमर्जेन्सी वार्ड छिरेको थिए ।
गाडीले हानेको भन्ने बित्तिकै मैले उहाँको अनुहारको एक प्रकारको नक्सा बनाईसकेको थिए । आफूले बनाएको नक्सा भन्दा निकै भयानाक अनुहारको नक्सा देखेर म थचक्कै बसेँ । बाथरुम छिरेर मुखमा पानी फ्यालीरहें । कुनै नर्स आएर मलाइ उठाइन । बिरामी दर्ताका क्रममा मेरो नाम ठेगाना, सम्बन्ध, सम्पर्क नम्बर साथै सानीमाको नाम, ठेगाना, काम र उमेर सोधियो । मैले बताए । बल्ल उहाँको उपचार शुरु भयो । कपाल काटियो । कन्चटबाट बगीरहेको रगत रोक्न नर्स र डाक्टरको झुण्ड क्रियाशील थियो । कैंचीजन्य औजारहरु सानीमाको अनुहारमाथि दर्जनौंको संख्यामा निरन्तर चलिरहेका थिए । ब्यान्डेज लगाउने कामले निरन्तरता पायो । तर रगत बग्न रोकिएन ।
निकै बेर पछी बाहिर निस्किएर आफन्तजनहहरुलाई फोन लगाए । साढे १० मा वयोधा हस्पिटल पुगेको म १२ बजे सिटि स्क्यानको लागि एम्बुलेन्समा चढेर बि एण्ड बि, ग्वार्को पुगेँ ।
त्यसभन्दा अगाडी याद भएसम्ममा म एम्बुलेन्समा चढेको थिइन् । उसैगरि एम्बुलेन्स दगुरेको थियो । सोहि उदेकलाग्दो साइरन बजिरहेको थियो । म चढेको एम्बुलेन्स पनि उस्तै हतारोमा थियो । मसँगसँगै भएका दुइ वटी नर्स सलाइन पानीको बोत्तल र स्ट्रेकचरको पोजिसन मिलाउन ठिक बनाउन लगातार लागिरहका थिए । एम्बुलेन्स चालक जाम छिचोल्न स्टेरिंग र गियर सक्दो तोडमोड गरिरहेका थिए । चालक, नर्स र एम्बुलेन्स सबै निकै हतारमा थिए । र ती सबै भन्दा कयौं गुणा बढी म हतारमा थिए । हो, त्यस दिन मलाई निकै हतार थियो ।
टाउकोबाट रगत बग्न रोकिएको थीएन । बिहान ८:१७ मा दुर्घटना भए पश्चात १०:२३ मा अस्पताल ल्याइपुर्याएको लेखिएको कार्ड म आफै समाईरहेको थिए । ‘मुलाहरु एम्बुलेन्स हो की ट्रयाक्टर ? ६० किलिमिटरको बाटो २ घण्टा कसरि लाग्छ ? प्रतिघन्टा ६० किलिमिटरको दरले त जुनसुकै यात्रुवाहक बस पनि त दौडिन्छ ।’ मलाई त्यस बेला यो सम्म पनि ख्याल भएन कि बाटोमा जाम पर्न सक्छ, जामबाट एम्बुलेन्स फुत्कन नपाएको हुन् सक्छ । मेरो जस्तै प्रवृति भएका अरु पनि हुँदा हुन् । तिनीहरुमध्ये कहिलाई साच्चै हतारो पनि हुँदो हो । ५ जनाले आधा आधा मिनेट रोकेकै भएता पनि साढे दुई मिनेट रोकीयो । अहँ…, म कसैगरी शान्त हुन् सकिरहेको थिइन् त्यतिखेर ।
बल्खुबाट निस्केर २ मिनेटमा बागडोल पनि पुर्याउन नसक्ने एम्बुलेन्स चालकसँग म रिसले आगो थिए । मैले एक शब्द उसँग त्यतिबेलासम्म बोलेको पनि थिइन् । उसले एक नक्खु पुग्दा जेब्रा क्रस गरिरहेका व्यक्तिहरुलाई हातको इशाराले बाटो काट्न भन्यो । मेरो रिस गोली भएर बोलीमा निस्कियो, ” यार एम्बुलेन्स हो, बाटो काट्नेहरु पनि रोकिन्छन् । के स्वादले उनीहरुलाई बाटो काट्न दिनुभएको ? ” त्यसपछी उसले म तिर एकफेर पुलुक्क हेर्यो अनि सानिमा तिर एकफेर । सानिमाको रगत बग्न रोकिएको थिएन् । सँगै आएका दुइ नर्समध्ये एकलाई सलाइन पानीको बोतल समाउँदा नै ठिकै थियो । अर्की रगत रोक्न अनेक प्रपन्च रच्दै थिई । ती दुवैमा कुनै हतारो थिएन । जस्तो की यति रगत बग्दैमा केहि भई हाल्दैन् ।
“कस्ता मु*हरु हुन् ? आधा मिनेट पर्खिएर बाटो काट्दा कुन चाही काम वित्छ ? को भोकै मर्छ ? कसको निन्द्रा टर्छ ? कसले आराम पाउँछ ? कसको जिन्दगी बच्छ ?” कुनै भयावह हाइड्राले मेरो दिमागमा जरा गाडेको थियो । र उसका लामालामा ट्यान्टकलसले शहरबासी सबैको घाँटी निमोठ्दै थियो । हो त्यतिखेर, हतारो गर्ने हराकोहिको म घाँटी निमोठ्न चाहन्थे ।
“के बाटो खनेको ? यो घर भत्काएर सिधै त्यो घरसम्म लान सकिन्नथियो ? यो घुम्ती किन बनाएको ? सडक बनाउन नजान्नेहरु के खान इन्जिनियर भई टोपलेका ? खाल्डो पुर्दा तीनीहरुले कुन चाही छाक भोकै बस्नुपर्थ्यो? यति जाबो खाल्डो पुर्दिएको भए पनि त रोकिएको रगत फेरी बग्दैनथ्यो ?” रगत चिउँडोबाट झरेर स्ट्रेचरमा जम्मा हुन् थालेका थिए । आँखा बन्दको बन्द थियो । कान माथि लागेको चोटले अनुहार पुरै रगतमय बनाइदिएको थियो । झन् बाटोका पाइलैपिच्छेका खाल्डाखुल्डीका कारण बगिरहेका रगतले मनपरि दिशा समाएका थिए ।
“किच्दे हुन्छ मुलाहरुलाई । के गर्या के ? कतिन्जेल लाग्या हुन् बाटो काट्न पनि ? ” यति भनेपछि उनले बल्ल एम्बुलेन्स अगाडी बढाए । एम्बुलेन्सको आवाज अझ चर्को बनाउन भने । एम्बुलेन्स बल्ल एकान्तकुना तर्फ लाग्यो । जाउलाखेल तर्फ जाने गाडी छुटीरहेका थिए । एम्बुलेन्स पुन: रोकियो ।
ट्राफिक रेस्पोन्स नै गरिरहेको थिएन । “११ बज्दासम्म नि मु* जाम पन्छाउन सक्दैन ? केको ट्राफिक भइ खान्छ यसले ? एम्बुलेन्स हो यार, बाटो बनाइदिन पर्छ नी । के मजाले जाउलाखेल जाने गाडीहरुलाई छोडीराछ ?”… एक्कासी मोबाइल करायो । मैले एकान्तकुना भनेर राखिदिए । कसको नम्बर थियो, फोनमा को थियो ? मैले हेरिन । डेढ मिनेट जति रोकिएपछी एम्बुलेन्स अगी बढ्यो तर सामुन्ने एक स्कुटीवली आइपुगी । एम्बुलेन्समा घ्याच्च ब्रेक लाग्यो । सानिमाको हात जोडले समातीरहेको थिए । छुट्यो । रगत चिउडोमा तप्प खसेर मेरो सेतो जुत्तामा पर्यो । रिसले अगाडी हेरे । देखे, उ थोरै पछाडि हटेर आफ्ना हातको चोर औंला र माझि औंलाले छाति छोएर निधार छुँदै छे । एम्बुलेन्स अगाडी बढ्दा सम्म उसले यो क्रम तीन चोटी गर्न भ्याईसकेकी थिइ । ‘त्यो केटि कस्ती थिइ, के लगाएकी थिइ, कस्टो रङको स्कुटीमा थिइ,ऊ देख्नेथी कस्ती ?’ मलाई याद रहेन ।
कुसुन्ती पुग्दासम्म म यै सोचमा हराए ? त्यो केटिले अघि त्यो के गरेकी हो ? त्यहा कुनै नदि थिएन, मन्दिर थिएन । फेरी उसले ईश्वरलाई सम्झेर भक्तिभाव व्यक्त गरे झैं त्यो के गर्दै थिई ?
कुसुन्ती, थसिखेल, महालक्ष्मी स्थान, चापाँगाउँ दोबाटो, सातदोबाटो,….कतिखेर आएर कतिखेर गए मलाई होस् रहेन । मलाई यति लामो सडक र यति लामो समय कहिल्यै लागेको थिएन । बाटोमा थुप्रै आउथे । एम्बुलेन्सलाई हात देखाउथे । र बाटो काटथे । मलाई एकफेर त लाग्यो पनि । यी व्यक्तिहरु तीनै हुन्, जसको मैले सयौं पटक बाटो काटेको थिए । जो अहिले निको भएछन् । र, मेरो बाटो काट्न आइपुगेका छन् । या ती बिरामीहरुको आफन्त हुनुपर्छ, जसले मलाई त्यसबेला पनि निकै असभ्य गाली गरेका हुँदा हुन् । म यस सोचबाट तब बौरीए जब पुन: मोजा नलगाएको मेरो खुट्टाको कुर्कुच्चामा एक थोपा तातो रगत तप्प तप्कियो । “होइन रगत त रोकिनुपर्ने होइन भनेको ?”, मेरो प्रश्नका कारण नर्सहरुले मुखामुख गरे । म उनीहरुलाई घुरीरहेको नै थिए, दुवैले एक फेर पुन: मुखामुख गरेर आफ्नो आँखा तल झुकाए ।
ग्वार्को नपुग्दै एम्बुलेन्स बायाँ मोडियो । बि एण्ड बिको गेट भित्रबाट एउटा कार बाहिर निस्किन खोज्दै थियो । जसका कारण एम्बुलेन्सको गति धिमा भयो । .. केहि अरु सहयोगी पनि आए । सिटि स्क्यानको लागि रेडियोलोजी रुममा छिराइयो । आधा घन्टा बाहिर रिगें । एम्बुलेन्स रित्तो छोडेर चालक र नर्स दुवै कतै गएका थिए । त्यहा मलाई चिन्ने कोहि पनि थिएनन् । तर म हर एकलाई चिन्थे । यी हर एकको गल्ती छ- यो हुनुमा । यी हर एकले थोरै नै भए पनि मेरो समय बर्बाद गरेका छन् । चाहे त्यो बल्खु देखि ग्वार्कोसम्म को बाटोमा हिडेर हुन्, मलाई हेरेर हुन्, मसँग बोल्न खोजेर हुन् या मलाई ढाडस दिने बहानामा मेरो मथिंङ्गल खराब बनाएर हुन् । एक समय त म हस्पिटलका तमाम डाक्टरहरुलाई समेत गाली गरिरहेको थिए ।
बाहिर टेबलमा बसेको निकै बेर भइसकेको थियो । भित्र छिर्न नदिएर हस्पिटलले झन म माथि ज्यादती गर्दै थियो । र, गोजीमा रहेको फोन बारबार बजिरहेको थियो । को सँग केके बोले मलाइ याद छैन । यत्ति याद छ, “रगत रोकिएको छैन, मर्छिन क्यारे ममी- सानिमा ।”
बेलुका रिपोर्ट लिने आउने सर्तमा हामी वयोधा फर्कियौं । बाटोभरि मलाई हरथोक बाधक बनिरह्यो । सडकका घुम्ती, खाल्डाखुल्डी, बाटो नछोड्ने प्राइभेट क्यार, हुईय.. हुईय..गर्दै दौडीरहने मोटरबाइक र जेब्राक्रसिंग आफ्नै निजि सम्पति ठानेर बाटो काट्ने ति पैदलयात्रीहरु । सबैलाई हतारो हुन्छ, तर सद्दे मान्छे भन्दा निकै हातार मर्न लागेको बिरामीलाई नै हुन्छ । लगभग ५ किलोमिटरको बाटो १० मिनेटमा एम्बुलेन्स चालकले काट्दा पानी म चालकमाथि खनीईरहेको थिए । तर उसका ओठ मुस्कुराइरहन्थे । मेरो हर गाली, रिस र आक्रोश ऊ सजिलै पचाईरहेको थियो । बाटाभर निकै फोन आयो । मैले फोन उठाईरहे । के के बडबडाइरहे ।
पुन: सानीमालाई इमर्जेन्सी वार्डमा राखियो । आइपुग्न पर्ने(सक्ने) जति आफन्त आइसकेका थिए । सोध्नु पर्ने प्रश्न जति मलाई सोधीरहेका थिए । र, मेरो आँखा बिल भर्न दगुरीरहेको बसको सह-चालक माथि खनीइरहेको थिए । ड्राइभर अझ सम्म आइपुगेको रहेनछ । सोहि सह-चालकसँग नम्बर मागेर फोन गरे । भन्यो, ” कलंकी आइपुग्न लागेँ । बिरामीको उपचार गर्न कुनै कसर नछोड्नु । यातायात संघसँग कुरा गरिसकेको छु ।”
३८ दिनको हस्पिटल बसाइँ बीच ४ चोटी म बि एण्ड बि पुगे । एम्बुलेन्सको नै यात्रा थियो ती सबै । र, ती पछिल्ला दिनहरुमा म आफूलाई थुकीरहेको थिए । आफूलाई सयौं मान्छेको हत्यारा बनाइरहेको थिए । चाहे ती जिउँदा नै हुन् । तर मैले निकै ज्यादती गरे । पश्चतापको घामले मलाई निकै लामो समयसम्म पोलिरह्यो । र, यी दिनहरुमा एकान्तकुनामा भेटिएकी त्यो स्कुटीवाली केटि र उसले गरेको त्यो हाउभाउ(आफ्ना हातको चोर औंला र माझि औंलाले छाति छोएर निधार छुनु) के थियो ? सोचेर नै व्यतित गरें । मैले कसैगरी थाहा पाउन सकिन, उसले त्यस दिन गरेकी थिइ ?
अलिक पछी कुनै दिन म रत्नपार्क जाँदै थिए । मसँगै सीटमा बसेको व्यक्ति अचम्मित पर्यो । घरि बाहिर हेर्यो, फेरी मलाई हेर्यो । अनि पुन बाहिर हेर्यो । र हास्यो । म पनि हासिँदिए ।
फेरी कुनै दिन । म कलंकी पुग्दै थिए । सँगैको सिटका एक अंकलले भने,” कलङ्की मन्दीर अलि माथि हो बाबु । कहाँ अहिल्यै मन्दिर सम्झेर ढोग्नुभएको ?”म फेरी पनि हासिँदिए ।
त्यस दिन म घर जाँदै थिए । माइक्रोले त्रिशुली नदिको पुल नाघेको ५ मिनेट जति भएको थियो । पल्लो सिटका आन्टीका आँखाले मलाई नियाले ।र, उनको मुख चल्यो । “त्रिशुली नदि त अलि अगी नै कट्यो होइन र ? काँ अहिले सम्झिरहनु भाछ गङ्गामाईलाई ?” म पुन: त्यस क्षण पनि हासिँदिए ।
त्यस्तै विभिन्न दिनहरुमा, विभिन्न ठाउँहरुमा म यस्ता थुप्रै प्रश्नको शिकार बनिरहे(छु) । हासोको कारण बनिरहे(छु)।
“मन्दिर नै छैन । होइन त के हातले यस्तो उस्तो गर्छस् हो ?”
“के गर्छ यो ? बेला न कुबेला केके जप ध्यान गर्छ ?”
“होइन तलाई के भाछ हँ अचेल ? अस्पताल छिर्दा नि कसैले ढोग्छ ?”
“ए । लौ तेरो मन्दिर आयो । हातले छाती छुँदै निधार छुँदैनस् ?”
“यार झल्लु । के पुरानतवादी सोच बोकेर हिडीराँ हो? अहिलेको जमानामा यो सब गरेर सम्भव नै छैन यार ।”
“यार कवी । तिमी पनि भनेसी भगवान मान्छौं ?”
“मुला मन्दिर चाहि कहिल्यै छिर्दैन ? बाटोमा चाहि मन्दिर नै नदेखि पनि ढोग्छ । पातकी मुला ।”
एक दिन कोटेश्वर आसपास म:म: खाइरहेको थियौं । साथीले भन्यो, “होइन के गर्छस् हो तं ? तैले यसो गर्दैमा बिरामी बाच्ने हो र?” म हासिँदिए ।
फिल्म हेरीरहँदा पनि मेरा दुइ औंला छाती हुँदै निधारसम्म पुगीसक्दा रहेछन्, अरुले भन्दिएपछी थाहा पाउँछु । अहिले राजधानीमा दिनहुँ म साइकल चलाउँछु । जाम, धुवाँ, धुलो र ठुला गाडीको हाइ स्पिडको चपेटामा म सधै च्यापीई नै रहन्छु । यद्दपी यस्ता बेलामा पनि मेरा दुई औंला छाती हुँदै निधार छुन पुगीहाल्छन् ।
मूल सडकको यात्रा गरिरहँदा, राजधानीका फुटपाथमा डुलीरहँदा, चोकमा बसेर चिया पिईरहँदा, कोठामा बसीरहँदा, मलाई धेरैले कराए । धेरैले मलाई धेरै प्रश्न गरिरहें । अहँ, ..मैले आजसम्म पनि कसैलाई केहि बताइन । म त्यस्तो किन गर्छु ? कहिलेदेखि गर्न थाले ? त्यो गरेर के हुन्छ ?
अस्ति भर्खर बहिनि एस. एल. सी(एसइई) सकेर काठमाडौं आइ । इंगलिस ल्यांगोवेयजको क्लास बुझ्न बहिनि र म बालाजु आसपास थियौं । बाटो क्रस गरेर पुल पट्टी जाँदै थियौं । अलि पर देखि एम्बुलेन्सको आवाज सुनियो । मैले फेरी सोहि कर्म दोर्हाए । बहिनि मलाई र एम्बुलेन्सलाई बारबार हेरीरहेकी थिई । बाटो काटीसके पछी उसले सोधी, तैले अगी के गर्या दाइ ?
म फेरी हासिँदिए । ऊ मलाई हेरीरहकी थिई । मलाई बोल्न करै लाग्यो । ‘बानी । मेरो एउटा एउटा बानी छ, म एम्बुलेन्सलाई ढोग्छु ।” उसले पर.. पुगीसकेको एम्बुलेन्सलाई हेरीरही । र, अकस्मात उसले पनि उसैगरि । एम्बुलेन्स देखिन छोडेपछी म तिर हेर्दै उसले भनि, ‘बानी । म पनि बानि बसाल्छु । अब देखि म पनि एम्बुलेन्सलाई ढोग्छु ।”